Isbaanishka Biyaha ee Mareykanka - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey - Taranka
Isbaanishka Biyaha ee Mareykanka (ama AWS, oo la soo gaabiyo) waa mid ka mid ah noocyo dhowr ah oo laga soo saaray Ameerika. Diiwaanno la isku halleyn karo oo ka mid ah AWS ayaa dib ugu soo laabtay 1865. In kasta oo meesha eyga asalka ah ee asalka ah lagu muransan yahay, haddana waxaa si weyn loo rumeysan yahay inuu markii ugu horreysay ka soo muuqday dooxooyinka Wolf iyo Fox River ee Wisconsin, waxaana markii hore loo yaqaanay Brown Water Spaniel ama the American Brown Water Spaniel. Waxaa la tuhunsan yahay in Curri Coated Retriever iyo Irish Water Spaniel ay ka mid ahaayeen awoowayaasheed, iyo malaha Field Spaniel, ama dabar go'ay Old English Water Spaniel sidoo kale.
Ugaadhsadayaasha suuqyada ku teedsan wadada duulimaadka Mississippi iyo waqooyiga biyaheeda ayaa la sheegay in ay si ballaadhan u adeegsadeen taranka. Dadkani waxay u baahdeen eey qoryo badan ah oo si fiican uga dhex shaqeyn doona meeraha iyo kore. Jaakad cufan oo jilicsan ayaa ka caawisay eyga inay ka ilaaliso biyaha qabow iyo ciqaabta cimilada caadiga u ah Upper Midwest, iyo sidoo kale laga ilaaliyo laaluushka kaynta.
“Jump-toogasho” - waa habka ugaarsiga oo uu qorigu ku soo ruqayo biyo yar, naxdin iyo toogasho shinbiraha, ka dibna u dirayo eeygiisa si uu u soo soo cesho — sidoo kale waxaa si ballaaran loogu dhaqmay hareeraha wabiyada badan iyo “godadka” godadka leh muuqaalka woqooyiga Minnesota iyo Wisconsin. AWS ayaa iska amaahisay dhaqankan, maaddaama cabirkeeda yar iyo jaakad dhan-bunni ah ay u oggolaatay inay ku dhex milmaan caleenta xilliga dayrta halka ugaadhyahanku samaynayo qaabkiisa aamusan. Jacaylka eyga ee biyaha ayaa sidoo kale ka dhigtay mid ay jecel yihiin kuwa ilaaliya mink iyo muskrat traplines.
Markii la soo saaray noocii ugu weynaa ee British retriever ee goobta ugaarsiga Mareykanka, spanielkii yaraa ee bunni ayaa ka dhacay fadliga. Dhakhtarka F.J. Pfeifer ee New London, Wisconsin, ayaa loo tiriyay inuu gacan ka gaystay badbaadinta taranka. Qafisyada Pfiefer waxay hayeen ilaa iyo 132 eeyo ah, wuxuuna ka iibiyey sida ugu badan 100 eeyo yar yar sanadkii ugaarsadeyaasha ilaa fog Texas. Wuxuu siiyay dammaanad shuruud la'aan ah eeyaha, laakiin wuxuu ku andacooday in iibsade uusan waligiis ka faa'iideysan dalabka.
Pfiefer sidoo kale wuxuu sameeyay naadi isir leh wuxuuna gacan ka gaystay sameynta halbeeg qoran, kaas oo wadada u xaaray aqoonsi naadiga United Kennel Club sanadkii 1920, Buugga Field Stud 1938, iyo American Kennel Club 1940. Ey u gaar ah Pfiefer, 'Curly Pfiefer' , wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee Diiwaangeliyey Biyaha Mareykanka ee Isbaanishka.
Isbaanishka Biyaha Mareykanka Maanta
In kasta oo dadaalladii ugu horreeyay ee Dr. Pfiefer iyo kuwa kale oo xiiso leh, AWS aysan waligeed dib u soo ceshanayn ka hor Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Waxay weli tahay nooc naadir ah oo leh qiyaastii 3,000 oo jiritaan ah waqti kasta oo la bixiyo. Kaliya dhowr boqol ayaa la diiwaangaliyaa sanadkii.
Dhammaan tijaabooyinka waxaa laga helaa muggeed oo khadadka haray - laga yaabee inay yar yihiin seddex. AWS gebi ahaanba lama yaqaan meel ka baxsan Waqooyiga Ameerika. Xitaa gudaha Mareykanka, eeyaha iyo kuwa dhaqda waxay wali ku urursan yihiin gobolka harooyinka waaweyn. AWS waxaa loo qoondeeyay eeyga rasmiga ah ee gobolka Wisconsin sanadkii 1986.
AWS waligeed kuma caansaneyd faraantiga muuqaalka sida qaar badan oo ka mid ah qaraabadooda ciyaaraha. Natiijo ahaan, ma jirin kala qaybsanaan weyn muuqaalka muuqaalka garoonka iyo khadadka kursiga keydka, iyo noocyada guud ahaan waxay hayeen awoodii ugaarsiga ee soo jireenka ahaa. AWS wuxuu ka sarreeyaa inta badan dib-u-soo-noqoshada sida qulqulatada dhulka, oo si habsami leh u shaqeynaya isla markaana ku dhex jira qoryaha. Eeygu wuxuu leeyahay sanka 'spaniel' xoog leh iyo karti ur wanaagsan. Ugaadhsadayaasha casriga ahi waxay u adeegsadaan eyga sidii ay u heli lahaayeen ugana soo ceshan lahaayeen noocyo kala duwan oo ka mid ah ciyaarta dhulka kore, oo ay ku jiraan dawakhaadyada, macluusha ruffed, grouse-ka fiiqan, qoolleyda baroorta ah, qoryaha loo yaqaan 'woodcock', iyo xitaa dabagalo, xayawaanno, iyo bakayle.
Laakiin waa doorkeeda xirfad-yaqaan, cabbir ahaan, cabbir-qaboojiye biyo-celin ah oo ka caawiyay taranka inuu helo boos jilicsan oo ku yaal qalbiyada biyo-fadhiistayaasha casriga ah. AWS si sahal ah ayaa looga ugaarsan karaa doon yarida ama skiff-ka iyada oo aan la carqaladeynin doonta. In kasta oo ay yartahay, eeygu waa nin jilicsan oo awood u leh inuu soo ceshado shimbiraha waaweyn ee sida berriga Kanada. Awood sheegashadan, oo ay weheliso dabeecaddeeda ilaalinteeda guriga, ayaa ku kasbatay sumcad ah inay tahay 'Chesapeake ka mid ah isbaanishyada'.
Koodhkeeda dahaadhku wuxuu ka dhigayaa mid ku habboon xaaladaha biyaha qabow marka loo eego wax kasta oo kale. Bishii Juun 1992, AWS waxay noqotay tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ku guuleysata cinwaanka ugaadhsiga iyada oo loo marayo Ururka Hawlgabka Ugaadhsiga Waqooyiga Ameerika.
Kala duwanaanta noocyada ayaa ka muuqata waxqabadyo kala duwan oo milkiilayaasha AWS iyo eeyahoodu ka qayb galaan. Bishii Diseembar 1993, AWS waxay noqotay tii ugu horreysay ee ku guuleysata horyaalnimada kubbadda duulista ee FDCH oo ka socota Xiriirka Kubadda Cagta Waqooyiga Ameerika. 'AWS' kale waxay kaqeyb galaan nashaadaadyo kaladuwan oo ay kamid yihiin tartamada adeecida, raadinta iyo samatabbixinta, iyo xitaa Schutzhund. Sanadihii la soo dhaafay, waxaa jiray xiiso sii kordheysa oo loo qabo 'AWS' oo ah eey show ah.
Astaamaha iyo Dabeecadda
Isbaanishka Biyaha ee Mareykanku waa eey cabirkiisu dhexdhexaad yahay oo leh dabo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Celceliska AWS waa 17 ″ dherer ah oo miisaankiisu yahay 38 lbs. Koodhka midabka buniga ahi wuxuu u dhexeeyaa beerka ilaa shukulaatada mugdiga ah, wuxuuna si aad ah ugu duuban yahay sida 'Curly-coated Retriever's', ama qaab dabacsan, qaab aan caadi ahayn oo loo yaqaan 'marcel'.
AWS waa mid caqli badan, tababaran, oo daacad u ah sayidkiisa. Guud ahaan waa u jilicsan yahay xayawaanka iyo carruurta, waxayna ka dhigtaa xayawaan gurijoog ah oo ku habboon. Eygu wuxuu saaxiibtinimo la leeyahay shisheeyaha sida saxda ah loo baray. Waxay ka dhigeysaa ilaaliye aad u fiican, feejignaanta ayaa ah milkiilayaasha sawaxanka qalaad ee dhismaha ka socda. Cabbirkeedu yar yahay ayaa ka dhigaya mid ku habboon guryaha yaryar sida guryaha magaalooyinka iyo xitaa guryaha. Laakiin sida inta badan cayaaraha isboortiga, waxay u qalantaa qaddar jimicsi dhexdhexaad ah iyo is dhexgal bulsho si ay si fiican ugu habboon tahay.
AWS-du uma hamuun qabato-in-la-farxiyo sida qaar ka mid ah noocyada kale ee isbaanishka. Waxay u egtahay inuu noqdo eey hal qof ah. Si tartiib ah ayuu u bislaadaa oo si fudud ayuu u caajismaa. Waa mid dareen ahaan xasaasi ah oo laga yaabo inay noqoto mid xishood badan ama bilaabanta 'cabsi-qaniinyada' haddii lagu daaweeyo qallafsanaan aan loo baahnayn. Eeygu wuxuu leeyahay u janjeera inuu ciyo, laakiin tan waxaa lagu niyad jabin karaa tababar habboon. Dad badan oo 'AWD' '' yodel '' markay faraxsan yihiin. Qaarkood waxay u baahan yihiin tababar joogto ah si loo yareeyo dabeecadaha dabiiciga ah ee calalinta, qoditaanka, iyo boodka. In yar ayaa dhul ahaaneed oo dagaal ku leh eeyaha qalaad.
Daryeelka iyo Tababarka
AWS waa inay heshaa tabobar rasmi ah. Sababtoo ah waxay u eg tahay eey hal qof ah, inta badan sifiican ugama jawaab celiso tababarka xirfadeed ilaa isdhexgal ballaaran la sameeyo bilowga nolosha. Eeygu waa mid dadka aad ugu janjeedha waana in lagu koriyaa guriga. Dabeecadda eyga, qaan-gaadhka qaan-gaadhka ah, iyo dulqaadka xanuunka badan ayaa ka dhigi kara qaabab tababar oo xoog badan oo xoog-ku-ool ah; gaaban, maalin kasta, fadhiyada tababarka ee socda ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loo soo saaro kartida AWS. Tababbarka sanduuqa ayaa aad loogu talinayaa.
Miyaanay ahayn Spaniels kuwa waaweyn, eeyaha timaha leh ee timaha leh dabo jiir u eg?
AWS mararka qaarkood waxaa lagu qaldaa Irish Spaniel-biyoodka la midka ah, dhif iyo naadir ah oo leh madaxa korkiisa oo xajmi leh, cabirkiisuna ka weyn yahay, iyo dabo dhuuban, 'jiir'.
Maxay u leeyihiin dabo dhaadheer? Ma dabada isbaanishka sida caadiga ah ma xirna?
Dabada dhaadheer waa qayb ka mid ah heerka isirka. Waxaa la sheegay inay u shaqeyso sidii roondada biyaha si dhaqsa ah u qulqulaya.
Marka, iyagu ma spaniels-ama wax-soo-hel?
Su'aashani waxay u kala jabisay taageerayaasha AWS dhowr qaybood oo kala aragti duwan.
Si loogu tartamo imtixaannada iyo tijaabooyinka ugaarsiga AKC ee la oggolaaday, AWS waa in lagu sifeeyaa AMA mid isbaaroole AMA mid dib u soo ceshan kara. AKC waxay fiirineysaa naadiga waalidka ee taranka (kiiskan, Naadiga Ameerika ee Biyaha ee Ameerika) si ay u gaaraan go'aanka kala-saarista. Isagoo doonaya inuu soo bandhigo kala duwanaanta noocyada dhulka hoostiisa ah iyo sidoo kale duurka, AWSC mar ay codsatay laba nooc. Qoondaynta noocan oo kale ah waxay furi lahayd sanduuq pandora ah oo loogu talagalay AKC-shaki la’aan waxay keeneysaa naadiyo kale oo isir leh oo raadinaya isla xaaladda eydooda. Xisbiga AKC ayaa diiday dalabkaas. Naadiga waalidku wuxuu ugu dambeyntii doortay inuu sii wado noocyada aan loo kala saarin.
Koox kale oo ka mid ah fannaaniinta AWS-Ururka Biyaha ee Isbaanishka ee Biyaha (AWSFA, http://www.awsfa.org, ama info@awsfa.org) -waxaa la aasaasay 1993, waxayna si firfircoon u dhiirrigelinayaan doorbidooda kala-soocidda spaniel.
Hadday ka dhigto roogga guriga iyo wehel ugaarsiga ah, maxay u badan tahay?
Qaar badan ayaa dareensan in AWS aysan u qurux badnayn sida loo dhigmo English Springer Spaniel oo la barbardhigi karo, waxayna ka maqan tahay sanka guga Springer iyo duufaanta nool. Eyga guud ahaan looma iibin karo sida Labrador oo waxaa laga yaabaa inuu dhib badan ku qabo maaraynta surwaal qallafsan, shimbiraha waaweyn, soo-celinta dheer, iwm. Koofiyaddiisu waxay u noqon kartaa soojiidashada burrs, waxayna u baahan tahay dayactir dheeraad ah oo ugaadhsadaha woqooyi ka fog marka loo eego kuwa qaarkood oo ka mid ah noocyada aadka u dahaarka leh.
Maqnaanshaha kala-soocidda AKC ayaa laga yaabaa inay door ka ciyaarto nacasnimada eyga-taranka hubaal ma ahan rajo laga qabo gorgortanka xiisaha leh. Soo-gaadhis la'aantaani, ayaa iyaduna, ka dhigaysa AWS inay ka baxdo indhaha caabudda ee ciyaartoy iyo dumar badan. In yar ayaa eey ka muuqdaan tartamada keydka AKC, taas oo xaddideysa fursadaha milkiileyaasha xayawaanka iyo kuwa eyda jecel inay noqdaan kuwa ku cajabiya AWS.
Ma jiraan tijaabooyin kale oo ugaarsi ah ama tijaabooyin ah oo lagu soo bandhigayo kartida noocyada?
AWS waxay xaq u leedahay inay ku tartanto dhacdooyinka United Kennel Club, Ururka Waqooyiga Ameerika ee ugaarsiga ugaarsiga, iyo tijaabooyinka ay qaadaan kooxda waalidka iyo AWSFA. La xiriir hay'adaha kala duwan wixii faahfaahin ah ee ku saabsan imtixaannada ama taariikhaha imtixaanka.
Ma caafimaad qabaan?
Caannimo la'aan (sidaa darteedna, la'aanta taranka aan kala sooc lahayn) ayaa ka caawisay AWS inay ka baxsato qaar badan oo ka mid ah cudurada hidaha ee ku dhaca aafooyinka kale. Qaar ka mid ah milkiileyaasha muddada dheer waxay caddeeyeen in eeyahoodu aysan waligood u baahnayn daryeel caafimaad xoolaha. Liiska cudurada kale iyo cudurada kale ee la yaqaan ayaa hoos ka muuqda.
Sida kuwa kale ee wax soo qaada, AWS waxay leedahay jaakad laba jibbaaran oo ka ilaalisa canaasiirta. Dharka gudaha ayaa kafiican oo u adeega sidii dabool. Dharka kore ayaa aad u qalafsan, dib u celiya biyaha isla markaana eeyga ka ilaaliya laaluushka meelaha kore. Jaakadani waa la daadiyo guga, laakiin waxay si fudud ugu soo baxdaa cadayasho dhexdhexaad ah.
Dharka gacmahoodu ma u baahan yihiin qurxin badan?
Celceliska jaakadda AWS ayaa dhab ahaan kaliya qiyaastii 1/2 ″ inji ka dheer ta Labrador Retriever. Si kooban, usbuuciiba mar cadayashada ayaa kufilan inaad kuhesho qaab wanaagsan. Milkiilayaasha qaar si xilliyo ah ayaa eyyadooda loo jarjarey si looga ilaaliyo inay u ekaadaan inay yihiin jiir badan. Maydhasho isdaba joog ah ayaa lagula talinayaa eeyahaas oo si joogto ah u dabaasha, si loo xakameeyo urta 'eeyga-qoyan'. Qaar ka mid ah ugaadhsadayaasha / tababarayaasha goobta ayaa eeygoodu sii gooyaan iyagoo gaagaaban inta lagu jiro xilliga si aan jubbadu u qaadin bur bur badan. Waliba kuwa kale saliid bay ku xoqaan jaakada kahor intaysan aadin si ay ugu fududaato saarista gubashada.
Ma yihiin kuwo sarreeya?
Taranka guud ahaan waa mid jilicsan marka la siinayo qadar macquul ah oo jimicsi ah.
Ma saaxiibtinimo leeyihiin?
Eeyaha badankood waa kuwo saaxiibtinimo leh, in kastoo aan loogu aqoon caanbaxay dabadooda sida qaar ilma adeerradood ah. Mararka qaarkood qofku wuxuu heli karaa xarago ama dabeecad xumo 'AWS', laakiin tani maahan astaamaha nooca. Dabeecadda AWS waxay caadi ahaan ku dhacdaa meel u dhexeysa ingiriisiga 'Springer Spaniel' iyo kan madaxbannaanida ah ee 'Water Water Spaniel'.
Dhibaatooyinka Caafimaadka iyo Caafimaadka
Muddo tobanaan sano ah, AWS 'waxay ku xirnaayeen' beeraha Midwest, waxaana badanaa looga tagay inay naftooda la baxaan. Tani waxay keentay in shahaado cayiman oo xulasho dabiici ah halkaas oo intii ugu adkeyd ay badbaaday. Xitaa maanta, AWS ayaa ah mid caafimaad qaba oo aad ufiican illaa iyo eeyaha ay aadaan.
Si kastaba ha noqotee, iibsadayaasha eeyaha mustaqbalka waa inay la macaamilaan kaliya kuwa soo-saarayaasha ah ee hela nadiifinta indhaha CERF iyo qiimeynta OFA ama PennHip sinta ee kaydka taranka. In kasta oo dhacdooyinka 'Atichy Progressive Retinal Atrophy' iyo 'Hip Dysplasia' ee AWS la rumeysan yahay inay hooseeyaan marka la barbar dhigo noocyada la midka ah, haddana labada cudurba wey ku liitaan dabeecadda. OFA, PennHip, ama CERF nadiifinta eeyaha yar yar waalidkiis damaanad kama qaadin in eeygaagu uusan dhaxli doonin cudurada, laakiin baaritaanka noocan oo kale ah ayaa hada ah habka ugu wanaagsan ee loo heli karo yareynta guud ahaan cuduradan guud ee eyda guud.
Liistada soo socota ee cudurada iyo ciladaha waxaa lagu helay sahan lagu sameeyay astaamaha qaran ee AWS. Xaaladahan qaarkood waxay ku badan yihiin dhammaan eyda (sida xasaasiyadda ama hypothyroidism). Kuwa kale waxay si cad u dhacaan si aad u yar (tusaale, hermaphroditism). Waliba kuwa kale, sida alopecia (timo luminta), ma aha kuwo wax u dhimaya ama naftooda halis gelinaya.
Atrophy Retinal Progressive (PRA)
Isku-laabashada 'Disinal Dysplasia-folds'
Macluumaadka Nooca Bulukaha ee loo yaqaan 'Blue Heeler Dog': Wax kastoo aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Xuduudaha Collie Lab Mix - Hagaha ugu dambeeya ee Borador
Jack Russell Terrier Dog Information iyo FAQs
Tilmaamahaaga cuntada eeyga ugu fiican ee loogu talagalay Soo-celinta Dahabka ah
Liiska oo Dhamaystiran Ey kasta oo Feist leh: Dhammaan 14 iyaga ka mid ah
King Shepherd: 10 Sababood oo Eygan Adhijirka ahi u gaar yahay
Macluumaadka Taranka Spain ee Ey Spaniel
Magacyada Eyga Badass: 70 Fikrado Wanaagsan oo loogu talagalay Burcadda, Xannibaadda & Xannaanada Xayawaanka ah
Yar oo leh Qalbi weyn: La kulan Chiweenie
Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Isku-Dhafka Shih Tzu Chihuahua
pomeranian iyo poodle isku dar ah eeyaha
godka iyo eeyaha isku dhafka ah
miyay badbaado u tahay eyda inay cunaan qaraha
labrador gold retriever isku darka puppy
pitbull sanka cas oo bunni ah